TheAwards: loka ho an'ny lalao finday sy fampiharana tsara indrindra any Espana amin'ny taona 2018 | Androidsis
TheAwards: loka ho an'ny lalao sy fampiharana finday tsara indrindra any Espana amin'ny taona 2018
Eder Ferreño | | Lalao Android, About us, Tutorials
Amin'ity 15 Novambra ity dia hatao ny fanontana voalohany an'ny TheAwards. Izy io dia lanonana fanaterana izay tadiaviny hahafantarana ny fampiharana sy lalao tsara indrindra ho an'ny Android sy iOS, izay any Espana no misy ny foibeny. Hetsika iray teraka tamin'ny tananan'ny masoivohon'ny fampiharana ara-barotra, PickASO ary The Tool, fitaovana fanatsarana App Store.
Amin'ity andiany voalohany an'ny TheAwards loka ity mahita sokajy 11 izahay. Ny loka dia mahatratra 150.000 Euros ny totaliny ho an'ireo sokajy 11 ahafahana mifaninana. Sokajy isan-karazany, mba hahatratrarana ireo mari-pankasitrahana marobe araka izay azo atao.
Miaraka amin'ny sokajy mpanjakavavy izahay, izay ny fampiharana finday tsara indrindra any Espana amin'ny taona 2018. Izy io no loka ambony indrindra izay irian'ny mpandray anjara rehetra. Ho fanampin'ity loka ity dia manana olon-kafa izahay ho an'ny fampiharana tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy, mizara ho fizarana maro samihafa, dia ny: Fiantsenana; Toekarena, fandraharahana, vola ary orinasa; Fialamboly, hetsika ary toetrandro; Famoronana sy famokarana (Sary, horonan-tsary, mozika, zavakanto sy famolavolana, AR Apps, famokarana, fampiasana, fitaovana, personalization); Fahasalamana sy fanatanjahantena (Fahasalamana, Fitness, Fitsaboana, Fanatanjahantena); Fivezivezena (fitsangatsanganana, fitaterana, fitetezana, sarintany, fiara ary fiara); Fanabeazana sy magazine (Fanabeazana & fitaizan-jaza, Comics, Boky, Vaovao, Gazety ary Gazety); Fomba fiainana (fomba fiaina, hatsarana, Sakafo sy zava-pisotro, trano sy trano); Tambajotra sosialy, fampiarahana ary fifandraisana ary lalao.
Ireo mpandresy dia hahazo loka miaraka amina fonosana misy serivisy avy amin'ny orinasa toa ny Amazon Web Services, PickASO, The Tool na AppSamurai, ankoatry ny hafa. Ny loka sasany izay mety hampiroborobo an'ireo orinasa ireo. Ny sandan'ny sandan'ny loka dia mihoatra ny 150.000 euro, amin'izao fotoana izao, satria mety hiakatra izany.
1 Ahoana ny fandraisana anjara amin'ny TheAwards?
3 ORGANIKA sy TheAwards
Ahoana ny fandraisana anjara amin'ny TheAwards?
Raha liana handray anjara amin'ity fifaninanana ity ianao ka hahazo loka amin'ity lanonana TheAwards ity dia mila mahafeno fepetra takiana ianao hahafahanao mandray anjara amin'ireo loka ireo. Amin'ny lafiny iray, ny fampiharana na ny lalao dia tsy maintsy manana birao voasoratra anarana any Espana, ny studio famoronana dia tsy maintsy manana izany. Inona koa, ny fampidinana ny rindranasa voalaza, na ao amin'ny App Store, Play Store na roa, tsy maintsy mihoatra ny 5.000 XNUMX.
Raha mahafeno ireo fepetra roa ireo ianao dia afaka mandray anjara amin'ny TheAwards. Mba hanaovana izany dia mila fenoy ity endrika ity mba hahafahanao mandray anjara. Ny fandraisana anjara amin'ireto loka ireto dia tsy misy vidiny ho an'ny mpandray anjara rehetra. Rehefa ao ity ny fisie fampiharana Malagasy, Tonga ny fotoana hampiroboroboana ny firotsahan-kofidinao. Hanana hatramin'ny 12 Novambra ianao hanatanterahana izany.
Ny fangatahana telo voafidy indrindra ao anatin'ny sokajy tsirairay dia ny lalao famaranana. Noho izany dia ho feno ny fangatahana 30 amin'ity lanonana loka ity.
Ny mpitsara dia hisafidy mpandresy isaky ny sokajy ary iray amin'ny sokajy fampiharana tsara indrindra any Espana amin'ny taona 2018. Ny TheAwards dia hotanterahina amin'ny 15 Novambra any Barcelona, ​​manomboka amin'ny 18 hariva ao amin'ny Duvet Club Barcelona (c / Còrsega 327). Hetsika izay ankalazaina mandritra ny fety fampiharana ORGANIKA.
Efa naseho ireo mpikambana ao amin'ny mpitsara ny hetsika, izay ho: Vanessa Estorach, mpiara-manorina ny Women In Mobile; Evgeny Predein, CEO an'ny Apiumhub; Elia Méndez, Tale jeneralin'ny Mobile Marketing Association any Espana (MMA Spain); Thomas Petit, mpikambana ao amin'ny ekipa fitomboana ao amin'ny app 8fit ary Ricard Castellet, COO ao amin'ny Barcelona Tech City.
ORGANIKA sy TheAwards
Lanonana mari-pankasitrahana TheAwards dia ao anatin'ny antoko fampiharana ORGANIKA, izay efa mankalaza ny andiany fahefatra amin'ity taona ity. Alohan'ny hamoahana ireo fangatahana mandresy, ny mpanatrika dia afaka manatrika lahateny marobe, efatra amin'ny fitambarany, tantara momba ny fahombiazan'ny fampiharana finday. Ireo mpandahateny amin'ny lahateny voalaza dia: Andrea Vian, mpitarika ny ekipa SEM & Lehiben'ny Marketing amin'ny finday ao amin'ny eDreams ODIGEO sy Anna Juan, Manager Marketing ao amin'ny Scoot.
Aorian'ireny lahateny ireny sy ny lanonana mari-pankasitrahana, fety no hatao-fampandehanana fampiharana. Ka io dia fotoana tsara hanapariahana ny fangatahanao na ny orinasanao.
Ny fandaminana ORGANIC sy TheAwards dia tanteraky ny mpanohana toa ny Amazon Web Services, Infojobs, Headway, ary AppsFlyer. Ho fanampin'ireo mpiara-miasa marobe amin'ity hetsika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » TheAwards: loka ho an'ny lalao sy fampiharana finday tsara indrindra any Espana amin'ny taona 2018
Ahoana ny fomba firaketana fampiofanana miaraka amin'i Google Fit